FAFITO - Fiangonana Loterana Malagasy
FAMPIANARANA sy FANABEAZANA TEOLOJIKA LOTERANA
TRANO PRINTY FLM
AMLT – Asa Misiona Loterana amin’ny Tantsambo
FLF (Foibe Loterana momba ny Fifandraisana)
KTLM (Kristiana Tanora Loterana Malagasy)
FSFLM – SKOTISMA LOTERANA
VLM : Vokovokomanga Loterana Malagasy
ASA MISIONA IVELANY
MIRD (Malagasy Integrated	Rural Development )
IREO PASTORA sy TEOLOJIANA FLM
EZAKA IOMBONANA HO AN’IREO PASTORA FLM AO MADAGASIKARA
TOGETHER FOR OUR FLM PASTORS IN MADAGASCAR
ENSEMBLE POUR NOS PASTEURS FLM A MADAGASCAR
Mirafitra mivantana aminy ireo sehatra, soritr’asa, tetik’asa rehetra mahakasika ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra indrindra ireo izay mivoy ny asa mahakasika ny fambolena, fiompiana ary tontolo iainana.
Mitory ny filazantsara amin’ny olona rehetra sy amin’ny olona manontolo. Manantanteraka ny vinan’ny FLM eo amin’ny lafiny fitoriana ny filazantsara sy fampandrosoana.
Miandraikitra mivantana ny fampiroboroboana ny asa fampandrosoana indrindra eo amin’ny lafiny fambolena, fiompiana, tontolo iainana.
Manana andraikitra ny hampiroborobo ny asa fihariana eny amin’ny tontolo ambanivohitra mba ho fitondran’ny FLM ny anjara birikiny eo amin’ny fampandrosoana ny firenena amin’ny alalan’ny asa fambolena sy fiompiana.
Manana ny “plan strategique” ny FAFITO izay miompana indrindra amin’ny:
Fampiofanana sy fanentanana mikasika ny:
Fampiasana teknika moderina sy manara-penitra ahozahoana vokatra tsara (eo amin’ny lafiny kalitao) sy betsaka mba hisian’ny ambim-bava eo amin’ireo mpamokatra sy ahafahan’izy ireo ihany koa mivarotra ny ampahan’ny vokatra mba ho loharanom-bola.
Fanaovana tahiry iombonana ( village loans and savings association) izay itarihina ny tsirairay hivondrona ao anaty fikambanana ka hiara-hiasa ho fanamorana ny fanatanterahina ny asa
Fikajiana ny tontolo iainana: ny mahazavadehibe ny tokony handraisana anjara amin’ny fikajiana ny tontolo iainana manoloana ny zavamisy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Fandraisana anjara mivantana amin’ny alalan’ny fambolena hazo
Fampiasana angovo azo havaozina. Ny biogas izay lalana iray hampihenana ny fampiasana kitay sy saribao ary angovo azo lazaina ho tsy vidiana fa azo maimaim-poana.
Fanajana ny zon’olombelona eo amin’ny lafiny rehetra indrindra ny zon’ny vehivavy
Manantanteraka asa mivantana any amin’ireo mpahazo tombotsoa ( tantsaha, kristiana, …)
Miaramiasa amin’ireo soritr’asa an’ny FLM manatanteraka asa fampandrosoana
Miaramiasa amin’ireo sampana samihafa ao anatin’ny FLM
Miaramiasa amin’ireo sehatra samihafa ( fanjakana, ONG, …) mivoy ny asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra
Miaramiasa amin’ny mpiaramiasa mpamatsy vola samihafa:
RADIO FEON'NY FILAZANTSARA
Azonao alaina eto
FANAPAHAN-KEVITRA KMSL 142 - SPAf	(1483 téléchargements)
FANDRAVONANA NY ATRIKASA NATAO TANY ANTSIRABE	(1814 téléchargements)
HAFATRY NY FOIBE FLM	(854 téléchargements)
Taratasy Pastoraly ho amin'ny fanohanana ny Pastoran'ny FLM	(878 téléchargements)
Tatitra KMSL 140, Ambatofinandrahana	(1297 téléchargements)
Tatitra ny voina mahatratra Ankaramalaza	(757 téléchargements)
TATITRY NY KMSL 141 VONDROZO	(786 téléchargements)
Tolotr'asa FOIBE FLM	(322 téléchargements)
© 2020 | FIANGONANA LOTERANA MALAGASY|Rue Rakotonirina Stanislas, Antananarivo Madagascar